Indawo yokulima izityalo | Imibala yamabala ekhululekile yokukhuphela
Amagumbi efom egadi
Amaphepha amaninzi malunga nezityalo zegadi negadi
Uyilo lomyezo unikeza yonke into yokuzilibazisa ngegadi kunye nomngeni othethekileyo. Xa ucwangcisa imigaqo eyahlukeneyo kufuneka icingelwe, ngoko kamva idala umfanekiso ohambelanayo.
Qaphela imeko ze-site kwigadi
Nangona izityalo zisetyenziselwa ukubonelela iintsapho nezityalo kunye nemifuno, izityalo zemihlobiso zinomsebenzi wokunika ipropati isakhiwo kunye nokuphucula imbonakalo.
Umyezo uvame ukunikela ngaphezu kwexesha elizolileyo
Okukhethiweyo kuxhomekeke, phakathi kwezinye izinto, kwintsikelelo yomntu womnini wegadi. Kodwa ezinye iinkalo kufuneka zithathwe ingqalelo ukwenzela ukuba umyezo ungonwabeliswa ngazo zonke iinjongo zakho.
Zonke iintlobo kwilizwe lezityalo zinemfuno zayo kwindawo, umhlaba kunye nemozulu. Ngaphambi kokuba umdlalo wegadi ujongane udibana nokukhethwa kwezityalo kwigadi yakhe, kufuneka azixelele ngeemeko. Kulula ukwamkela iimeko ezikhoyo kwaye uhlakulele kuphela ezo zityalo ezinokukwazi ukuhlangabezana nazo kunokuba ukhethe iintlobo eziyinkqantosi ukuze zixelise ngeemeko zabo zokuphila. Ukongezelela, iintlobo ezineemfuno ezifanayo kwimeko yazo zivame ukuhambelana kakuhle.
Igadi zisebenza kuphela ukuba amanye amagumbi adalwa kuwo. Kule nto, umdlalo wegadi ujonga unokukhetha okukhethiweyo. Amanqanaba aphezulu angadalwa ngokusebenzisa izityalo eziphakamileyo ezahlukeneyo. Umyezo wegadi ufezekisa ukwahlula okucacileyo ngokumisa iinqaba, izindonga okanye ezinye iimida zokulala.
Izityalo ezinobumba zidlala indima ebalulekileyo kwi-design yangaphakathi. Njengoko i-solitaires inokuphucula ummandla weengingqi ezithile, kwiqela abalenza umfanekiso wesitidi. Zenza kwakhona utshintsho phakathi kwamanqanaba angaphantsi kunye naphezulu asemadini.
Ukuhlakulela izityalo ezinetyhefu kuphela ngononophelo
Nangona ubuhle bonke, akuzona zonke izityalo ezifanelekileyo kwigadi yasekhaya. Ukuba unabantwana okanye izilwanyana, khetha iintlobo ezingekho zetyhefu kuphela. Apha, i-hobby yegadi yezityalo kufuneka iqaphele ukuba akusiyo yonke isityalo esinetyhefu kuwo wonke umntu kwaye kuzo zonke izilwanyana ziyingozi. Kwakhona, izityalo zomntu ngamnye zingadliwa, ngelixa ezinye zityalo ezifanayo zihlelwa njengento enobuthi. Ukuze kuphephe umngcipheko wokutyhefuza, izityalo ezinjalo akufanele zihlonywe phambi kweqela elijongene nobungozi.
Yenza ingadi kakuhle
Yenza iibhokisi zeentlaba ensimini ngokwakho
Iinyoni zondla ebusika
Ngokwemvelo uhluma egadi
Ukugcina izityalo ngokufanelekileyo
Izilwanyana zezityalo zokunakekela iingcebiso
Ukutshala iibhaloni zezityalo ngokuchanekileyo
Izityalo zeBalcony apho ibhalkoni
Iibhanki zezityalo iingcebiso jikelele
Izityalo zetyhefu kwintsimi
Indawo efanelekileyo yezityalo zityalo
Amanzi ngokufanelekileyo umyezo
Izityalo ezimnandi kwigadi
UGingko biloba njengesityalo
Rose unakekele abaqalayo
Iingcebiso zokunyamekela iimpahla zakho
Izityalo ezingaphandle kubantu abasebenza
Izityalo zangaphandle ukukhanya okuphantsi
Izityalo zeNdlu kunye nezinambuzane
Ukufunda ubunjani kubantwana
Ukudlala ngaphandle kwenza abantwana bayonwabe
Iingcebiso zokunakekelwa kwe-orchid efanelekileyo
Ngaba ulahlekelwa zihloko ezithile kwi-Forum yethu yokuphila? Siyavuya ukurekhoda izihloko ezitsha ezingahambelani nentsapho kunye nabantwana. Thetha nathi!
Iingqungquthela zasehlotyeni zabaxhamli bezilwanyana ezikhuselekileyo: ezinye iindlela ze-4 ezivela ...